China suction Catheter mveliso kunye nabenzi | Kangyuan
2 Indlela ye-Silicone Foley Catheter
2 Indlela ye-Silicone Foley Catheter eneTiemann Tip
Abicah Foley Catheter ngoPhononongo lobushushu
I-Laryngeal Mask Airway yoSetyenziso oluNye
I-Tube ye-Endotracheal eneNgcebiso ekhethekileyo
Abicah esiswini Tube
Ukufunxwa kwe-SheacUkufikelela kwi-Sheath yokuSebenzisa ngaMnye
• Yenziwe nge-PVC engenabungozi kwezonyango, evulekileyo nethambileyo.
• Amehlo asecaleni agqitywe ngokugqibeleleyo kunye nesiphelo sembonakalo esivaliweyo sokwenzakala okungaphantsi kwithumbu lomqolo womqolo.
• T uhlobo isinxibelelanisi kunye conical isinxibelelanisi ekhoyo.
Isinxibelelanisi esibhalwe ikhowudi sokuchongwa kweesayizi ezahlukeneyo.
• Inokudityaniswa nezihlanganisi zeLuer.
Ukupakisha: Iifayile ezili-100 / ibhokisi, ii-600 ii-pcs / ibhokisi
Ubungakanani beCarton: 60 × 50 × 38 cm
Le mveliso isetyenziselwa ukukhuhlela kwesikhohlela.
Le mveliso yenziwe nge-catheter kunye nesinxibelelanisi, i-catheter yenziwe ngezinto ze-PVC zebanga lezonyango. Impendulo yecytotoxic yemveliso ayikho ngaphezulu kwebanga loku-1, kwaye akukho luvo okanye amandla e-mucosal reaction reaction. Imveliso iya kuba yinyumba kwaye, ukuba ayifakwanga inzala nge-ethylene oxide, ayiyi kushiya ngaphezulu kwe-4mg.
1. Ngokwezidingo zeklinikhi, khetha iinkcukacha ezifanelekileyo, vula ibhegi yokupakisha yangaphakathi, jonga umgangatho wemveliso.
2. Incam yetyhubhu yokufunxa isikhohlela yayiqhagamshelwe kwisithambisi soxinzelelo esingafunekiyo kwiziko leklinikhi, kwaye isiphelo sekhothetha sokufunxa isikhohlela safakwa kancinci kumlomo wesigulana kwindlela yokurhola isikhohlela kunye nemfihlo kwitrachea.
Akukho zichaso zifunyenweyo.
1. Phambi kokusetyenziswa, iinkcukacha ezichanekileyo kufuneka zikhethwe ngokobudala nangobunzima, kwaye umgangatho wemveliso kufuneka uvavanywe.
2. Nceda ujonge ngaphambi kokuyisebenzisa. Ukuba imveliso enye (epakishwe) ifunyenwe inemiqathango ilandelayo, akuvumelekanga ngokungqongqo ukuyisebenzisa:
a) Umhla wokuphelelwa kwenzalo iry
b) Iphakheji enye yemveliso yonakele okanye inemicimbi yangaphandle.
3. Le mveliso yenzelwe ukusetyenziswa kwexesha elinye kwezonyango, iqhutywa kwaye isetyenziswe ngabasebenzi bezonyango, kwaye yatshatyalaliswa emva kokusetyenziswa.
4. Kwinkqubo yokusetyenziswa, umsebenzisi kufuneka abeke iliso kwangelo xesha lokusetyenziswa kwemveliso. Kwimeko yayo nayiphi na ingozi, umsebenzisi kufuneka ayeke ukusebenzisa le mveliso kwangoko kwaye abasebenzi bezonyango bajongane nayo ngokufanelekileyo.
5. Le mveliso yi-ethylene oxide inzalo, ixesha lokucoca iminyaka emihlanu.
6. Ukupakisha konakele, ke ukusetyenziswa akuvumelekanga.
Gcina kwindawo epholileyo, emnyama kwaye eyomileyo, iqondo lobushushu akufuneki libe ngaphezulu kwe-40 ℃, ngaphandle kwegesi etshabalalisayo kunye nomoya olungileyo.
[umhla wokuphelelwa] Jonga ileyibhile yokupakisha yangaphakathi
Umenzi: I-HAIYAN KANGYUAN KWEZONYANGO ZOKUSEBENZISA I-CO., LTD
Egqithileyo Ezilahlwayo Endotracheal Tube Kit
Okulandelayo: Ukufunxwa kwe-SheacUkufikelela kwi-Sheath yokuSebenzisa ngaMnye
i-pvc yokufunxa i-catheter
Umzi mveliso wecatheter
Umthengisi wecatheter yokufunxa
Alahlwayo Ukuphefumla Icebo lokucoca ulwelo
Iityhubhu ze-Endotracheal Preformed (Ukusetyenziswa kwangaphambili kweempumlo)
I-Laryngeal Mask Airway kunye ne-Epiglottis Bar
Abicah Tracheostomy Tube